Shiinaha Warshad dheri karis badan oo badan leh iyo soosaarayaasha | Cunitaanka
1.20 Awoodda Liter, aluminium aluminium ah oo aan dhejis lahayn ayaa lagu saari karaa saliida madow ee aan saliida lahayn; Waxqabadka ballanta (30-720 daqiiqo); Daboolka dhalada ah ee dabacsan, oo leh qalab dahaadhan; Daboolka PP oo leh silikoon daboolan. Jirka ugu weyn ee leh saxanka kuleylka; digsiga qaboojiyaha, uumiyaha (Qalabka Tritan). Nidaamka kuleylka ee cusboonaysiinta wuxuu heerkulka ka dhigayaa mid deggan oo isku mid ah. Digsiga qaboojiyaha korontada wuxuu joojin doonaa kuleylka sii wadida oo wuxuu ilaalin doonaa heerkulka marka heerkulku gaaro meesha aad ku jirto, taas oo kaa caawinaysa inaad si fiican u kariso cunto wanaagsan. Oo waxaa loo isticmaali karaa qado, si fudud loo xanaasho.
Danab lagu qiimeeyay 220V 60Hz;
Miisaanka saafiga ah 2.45kg / PC
Cabirka Badeecada (L x W x H) mm 256x1 66x173 (mm)
Qalabka caag madow, xarig koronto (0.9m)
Waxyaabaha Dheriga aluminium dhinta-tuur leh oo leh saliid madow oo aan dhejis lahayn
Shaqada ballanta 30-720 daqiiqo
1. 1.2L naqshad kooban
Awooddu waa 1.20L aluminium dhinta-tuur leh oo leh saliid madow oo aan dhejis lahayn; Waxqabadka ballanta (30-720 daqiiqo); Daboolka dhalada ah ee dabacsan, oo leh qalab dahaadhan; Daboolka PP oo leh silikoon silsilad. Jirka ugu weyn ee leh saxanka kuleylka; digsiga qaboojiyaha, uumiyaha (Qalabka Tritan).
2. Lix shaqo karinta
Qalabka farsamada korontada ku shaqeeya ayaa la shiilay, la dubay, dheriga kulul, la kariyey, la kariyey, la dubay. Mid ka mid ah skillet koranto farsamo badan halkii 6 nooc oo digsi karinta
3. Saxan kuleyliyaha deg deg ah
Si dhakhso ah 60 ilbidhiqsi u kululee heerkul ahaan u dhigma qiiq la'aan, uma baahnid inaad sugto waqti dheer. Nidaamka kuleylka ee cusboonaysiinta wuxuu heerkulka ka dhigayaa mid deggan oo isku mid ah. Digsiga qaboojiyaha korontada wuxuu joojin doonaa kuleylka sii wadida oo wuxuu ilaalin doonaa heerkulka marka heerkulku gaaro meesha aad ku jirto, taas oo kaa caawinaysa inaad si fiican u kariso cunto wanaagsan.
4. Digsiga aan joogsiga lahayn waa la saari karaa
Digsiga skillet-ka korontada leh daahan teknoolojiyad sare leh, waana loo isticmaali karaa foornada, dabka. Sida ku cad liiska cuntada si aad u bedesho digsiyada kala duwan si aad si fiican ugu kariso cuntooyinka kala duwan ugana nadiifiso si fudud.
5. Naqshadaynta Ergonomic
Buro kontorool muuqda Si fudud ayaa loo doortaa shaqada karinta sida aad rabto. Sanduuqa qadada ee siyaada ah oo la qaadan karo ayaa la soo saari karaa. Daboolka muraayadda ee dabacsan ee leh xakamaynta dahaadhka, jirka ugu muhiimsan ee leh saxanka kuleylka; digsiga qaboojiyaha, uumiyaha (Qalabka Tritan).
Hore: Sanduuqa Qadada Korantada
Xiga: Juicer la qaadan karo
Mini Steamer Dheriga